सेयरबाट मालामाल बन्दै कहिल्यै घाटा नखाएका मारवाडीले दिए सेयरबाट उकालो लाग्ने यस्ता आधादर्जन बढी टिप्स » aarthikplus
२०७७ चैत्र ३१ गते, मंगलवार १०:३७ मा प्रकाशित
काठमाडौं । व्यापारिक घरानाका सफल सदस्य राजेन्द्र खेतान ब्यबसकियाकतामा चार्चित नाम हो। संबिधान सभा सदस्य समेत भएका खेतान सेयर कारोबारमा राम्रो दख्खल राख्छन। कहिल्यै घाटा नखाएका राजेन्द्र खेतानले दिए शेयर सम्बन्धि दिएका यस्ता छन् ७ टिप्स।
सेयर बजारको कुरा शुरु गर्दा कुन आधारमा सेयर खरिद गर्ने त ? भन्ने प्रश्न अहम् हुन्छ । लगानीकर्ताले कम्पनीको नाफा र वृद्धिको तथ्यांक हेरेर लगानी गर्नुपर्छ । कम्पनीको ग्रोथ कसरी भइरहेको छ त्यो हेर्न र विश्लेषण गर्न सक्नुपर्छ । भोलिका दिनमा माथिल्लो तहमा पुग्न सक्ने, रिजर्भमा पनि भएको कम्पनीको सेयर किन्दा घाटा खानु पर्दैन ।
नयाँ स्क्रिप्ट आयो । त्यसमा १० लाख रुपैयाँ हालिदियो, भोलिका दिनमा त्यो सक्सेस भएन भने त घाटा भैहाल्यो नि । बुझेर, सोचेर सम्झेर मात्रै लगानी गर्नुपर्छ ।
सेयर मार्केटमा अहिले क्राइसिस भएको कारण ब्रोकरहरुले आफ्ना ग्राहकलाई बुझाउन नसक्नु नै हो ।
मैले अहिलेसम्म सेयर बजारमा पैसा गुमाएको छैन । केही मात्रामा म्यूचुल फन्डमा मात्रै गुमाएको छु ।
सेयरमा डाइभर्सिफाइका हिसाबले मैले ५ वटा टुक्रामा विभाजना गरेर पैसा लगानी गर्छु । ५० प्रतिशत पब्लिक सेयरमा, ३० प्रतिशत प्रमोटर सेयरमा, १० प्रतिशत म्यूचुअल फन्ड र अरुहरु कुरामा र बाँकी १० प्रतिशत मुद्दति निक्षेपमा ।
एउटा लगानीकर्ताको मानसिकता बुझ्नुपर्छ । त्यो मानिस विज्ञ पनि होइन । उ ब्रोकरकहाँ हिँडेर जान्छ । ब्रोकरको सल्लाहमा निर्णय लिन्छ । उसले के विश्लेषण गर्न सक्दैन भने कुन स्क्रिप्ट राम्रो हो भनेर बुझ्न सक्दैन ।
मीठाइ पसलमा जाँदा पनि कि त आफूले कुन राम्रो हो भनेर बुझ्नु पर्यो । कि त सानैदेखि आमा बुबाले खुवाएको जेरी र रसबरी राम्रो हो भन्नु पर्यो । बजारमा आज आएका नयाँ मिठाइ चिन्न गाह्रो हुन्छ । भने त्यो मिठाइ नकिन्न पनि सकिन्छ । त्यस्तै स्टक मार्केटमा २० वर्षदेखिका कम्पनीमा विश्वास गर्नुपर्यो । होइन भने नयाँ आएका कम्पनीको सेयर लिनुपर्छ । १०० रुपैयाँको सेयर हो २०० रुपैयाँ कसो नपुग्ला भन्ने हिसाबले हाल्दा मान्छेले त्यहाँ फेल खान्छ । बीचमा हाइड्रोले खराब बनायो ।
कम्पनीहरु मर्जमा गए । क्यास नआएर बोनसमा आयो । २ अर्बको बैंक ८ अर्ब पुग्यो । साइज बढ्यो । तर त्यसपछि आउने लाभांशको अनुपात घट्यो । त्यसैले लगानीकर्ताले लगानी गर्नुभन्दा अगाडि स्क्रिप्ट विश्लेषण गर्न सक्नुपर्छ ।
मेरो बिचारमा लगानीकर्ताले ७ वटा कुरा बुझ्नुपर्छ
१) स्क्रिप्ट हेरेर मात्रै लगानी गर्नुपर्छ । कति पुरानो कम्पनी हो, त्यसको वृद्धिदर कस्तो छ ? भोलिका दिनमा कति ग्रोथ गर्न सक्छ जस्ता कुराहरु ख्याल राख्नुपर्छ ।
२) म भोलि अलिकति पैसा कमाएर बेच्छु भन्न हुँदैन । यदि त्यसरी १ हजार मानिसमा ५ सय जनाले मात्रै सोच्ने हो भने अवस्था प्यानिक हुन्छ । मार्केट डाउन हुन्छ । त्यसैले होल्ड गर्न सक्नुपर्छ ।
३) कम्पनीको २/३ वर्षको रेकर्ड हेर्नुपर्छ । कम्पनीको सबल पक्ष हेर्न सक्नुपर्छ । त्यसमा लगानी बढाउने कि ? लाभांश खाएर बस्ने कि भन्ने कुरा बुझ्न सक्नुपर्छ ।
४) आफ्नो इक्विटीको ३० प्रतिशतभन्दा बढी लोनमा जानु हुँदैन् । यसो हुँदा मार्जिन कल गर्दा पनि थेग्छ र ब्याजले पनि थेग्छ । एक तिहाइभन्दा बढी लोन लिन हुँदैन् ।
५) अब ब्याज त बढ्यो, ब्याजदर घटाउने व्यवस्था कसरी गर्न सकिन्छ ? बैंकले, राज्य कसरी हुन्छ त्यो हेर्नुपर्छ ।
६) मार्जिन लेन्डिङ धेरै सजिलो काम हो । एटीएम मसिन जस्तै हो । ६ महिना, ९ महिनाको भ्यालुएसन हुन्छ त्यो हेरेर ४० प्रतिशतसम्म दिने हो । १० प्रतिशतको रिक्स राखेर दिने हो । त्यसमा बैंक नै जानुपर्छ भन्ने छैन । ब्याक अफ गरेर ब्रोकरलाई हुन्छ वा कन्सलटेन्सी कम्पनीलाई हुन्छ उनीहरुलाई काम गर्नका लागि सहजीकरण गरिदिनु पर्छ ।
७) हामी सैद्दान्तिक रुपमा के बुझ्नुपर्छ भने, म नाफा खाएर बिक्री गर्ने, म लामो समयसम्म होल्ड गरेर राख्ने वा मैले लगानीको प्रतिफलबाट आएको रिटर्नले परिवार चलाउने हो त्यो आइसकेपछि त्यो तीन वटाका बेग्ला बेग्लै स्क्रिप्टहरु हुन्छन् । त्यसमा आफूलाई होम्ने हो ।
अब यति भइसकेपछि के हेर्ने त ?
यदि सेभिङ क्लास भयो भने लाभांश बेस्ड जानुपर्छ । ठूलो लगानीकर्ताले होल्ड गर्न सक्नुपर्छ । ५ देखि १५ वर्षसम्म जान सक्नुपर्छ । मध्यम वर्गले आफूलाई चित्त बुझ्दो रिटर्न आएपछि स्क्रिप्ट परिवर्तन गनुपर्छ तर बाहिर आउनु हुँदैन । त्यसले मार्केटमा खरिद बिक्री पनि हुन्छ । र, सबै बाहिर पनि आउँदैन । किनभने अहिले मध्यम वर्गको संख्या ठूलो छ ।
स्क्रिप्ट परिवर्तन गर्ने हकमा म स्क्रिप्ट परिवर्तन गर्दैन् । मैले कम्तीमा ५ देखि १५ वर्षसम्म परिवर्तन गर्दैन् । मैले होल्ड गरेर राख्छु । मैले लगानी गरेको कम्पनीले कुनै समय राम्रो फाइदा दिन्छ भन्नेमा म विश्वास गर्छु ।
अहिलेको बजारलाई विश्लेषण गर्दा एउटा कुरा पक्का के हो भने बजारमा सेन्टिमेन्टस हुन्छ । त्यसले गर्दा नकारात्मक कुरा यसमा आउनु हुँदैन् । दोस्रो कुरा राज्यको भूमिका यसमा छैन । भनेपछि सरकारले गरेका र बोलेका कुराबाट तर्सनु पर्दैन् । तर पनि राज्यले नकारात्मक कुरा गर्नु हुँदैन् । राज्य चलाउने अर्थतन्त्रको इन्डिकेटर पनि स्टक भएकाले नकारात्मक कुरा आउनु हुँदैन् ।
आजभन्दा २० वर्ष अगाडिको कुरा गर्दा एउटा सेयर चाहियो भन्दै मानिसहरु आउँथे । तर आज त्यही मान्छेसँग धेरै सेयर छ । बोनस र राइट सेयर आउँदा धेरै डिम्याट खाताहरु खुलेका छन् । संख्याको सेयर बढीसकेपछि मानिसहरु बजारमा सेयर बिक्री गर्नेको संख्या धेरै भयो । त्यो एकैपटक ठूलो संख्या भयो । तर बजारमा खरिद गर्ने मान्छे भएनन र मूल्य घट्दै गयो । सेयरको ओभर सप्लाइ भयो ।
स्टकको बारेमा विज्ञ राय आउन सकेन । न मिडियाबाट, न विज्ञबाट वास्तविक जानकारी आउन सकेन् । प्राविधिक राय आउन सकेन् । जसले गर्दा मानिसहरु जहिले पनि द्विविधामा रहने भए । विश्वविद्यालयका मानिसहरु जो राजनीतिक रुपमा पूर्वाग्रह राख्दैनन् त्यस्ता मानिसहरुको विज्ञ राय आउन सकेन् ।